मेटाकएक्स: ग्राहक लाइफसाइक्लहरू सहकार्यपूर्वक परिणाममा आधारित बिक्रीको साथ प्रबन्ध गर्नुहोस् Martech Zone
एक दशक भन्दा पहिले, मैले सास उद्योगमा केही अविश्वसनीय प्रतिभासँग काम गरें - स्कट म्याकोर्कलको लागि उत्पाद प्रबन्धकको रूपमा काम गर्ने र डेभ ड्यूकसँग काम गर्ने धेरै वर्ष एकीकरण परामर्शदाताको रूपमा। स्कट एक अथक आविष्कारक थिए जसले कुनै पनि चुनौतीलाई उछिन्न सके। डेभ एक निरन्तर रूपान्तरणशील खाता व्यवस्थापक थिए जसले विश्वका ठूला संगठनहरूलाई उनीहरूको अपेक्षाहरू पार भएको सुनिश्चित गर्न सहयोग गरे।
यो आश्चर्यजनक छैन कि दुबै मिलेर बने, B2B बिक्री, कार्यान्वयन, र ग्राहक मंथनमा कठिनाइहरूको अन्वेषण गरे ... र समाधानको साथ आए, मेटाकएक्स। मेटाकएक्स एक प्लेटफर्म हो जसले खरीददारहरू र विक्रेताहरूलाई कागजात, ट्र्याक, र ग्राहकको व्यावसाय लक्ष्यहरू पार गर्न पारदर्शी सहयोग गर्दछ।
मेटाकएक्स उत्पाद अवलोकन
सासका ग्राहकहरू र डिजिटल उत्पाद कम्पनीहरूले विश्वासको कमी महसुस गरे कि बिक्रीका आश्वासनहरू राखिनेछ। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि के हुन्छ?
मेटाकएक्सले एक प्लेटफर्म बनाएको छ जसले आपूर्तिकर्ता र खरिदकर्ताहरू मिलेर मिलेर कसरी जीत गर्दछ भन्ने परिवर्तन गर्दछ। मेटाकएक्सले एक साझा स्थान प्रदान गर्दछ जहाँ आपूर्तिकर्ता र खरीददारहरूले परिणामहरू परिभाषित गर्न र सँगै मापन गर्न सक्दछ बिक्री, प success्क्तिबद्ध, र वितरण टोलीहरू ग्राहकहरूले देख्न सक्ने वास्तविक व्यवसाय प्रभावको वरिपरि।
खरीददार र विक्रेताहरु बीच सहयोगी प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ:
सफलता योजनाहरू - प्रत्येक ग्राहकको लागि कदम चालेको कार्य योजना बनाएर इच्छित व्यवसाय परिणामको उपलब्धि सुनिश्चित गर्नुहोस्।
टेम्प्लेट - विशिष्ट प्रयोग केसहरु र व्यक्तित्व लाई सरलीकृत गर्न र परिणाममा आधारित बिक्री र सफलता मापन गर्न सफलता योजना टेम्प्लेट उत्पादन।
सूचनाहरू - जब सम्भावित वा ग्राहकले तपाईंले साझेदारी गरेको पुलमा सामिल हुन्छन् वा कुनै पनि पुल तत्वसँग अन्तर्क्रियामा सूचित हुन्छ ताकि तपाईं वास्तविक समयमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ।
क्षणहरू - ग्राहक जीवन चक्रमा नयाँ पल्टहरू मनाउँनुहोस् — नयाँ साझेदारी, पूरा कार्यान्वयन, र अगाडि गति देख्नका लागि नविकरणमा हस्ताक्षर।
लाइफसाइकल चरणहरू - तपाईं र तपाईंको ग्राहकहरू छोटो र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू पूरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न प्रत्येक लाइफसाइकिल चरणमा प al्क्तिबद्ध सफलता योजना सिर्जना गर्नुहोस्।
Handoffs - सबै समान पृष्ठमा रहेको र साझा लक्ष्यहरू र उद्देश्यहरूको लागि कार्य गरिरहेको सुनिश्चित गर्न मेटाकएक्स भित्र ह्यान्डअफ कल्पना गर्नुहोस्।
पुल - साझा र सह-ब्रांडेड स्थानमा ग्राहकहरू र सम्भावितहरूलाई आमन्त्रित गर्नुहोस् जहाँ तपाईं कागजात गर्न सक्नुहुन्छ र सफलता योजनाहरूको वरिपरि सहयोग पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ।
टोली - ग्राहकको अनुभवलाई जीवनमा ल्याउनुहोस् र प्रत्येक लाइफसाइकल चरणमा प .्क्तिबद्ध भएका टोलीहरू सिर्जना गरेर प्रासंगिक सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य शुरू गर्नुहोस्।
धारणा चेतावनी - छुट्टै प्रतिधारण जोखिमहरू पत्ता लगाउनुहोस् विशिष्ट कार्यहरू र व्यवहारहरू ट्र्याक गरेर जसले ग्राहकहरू चिर्लुम्मै पर्छ भन्ने कुरा प्रकट गर्दछ।
एक MetaCX सफलता योजना मा प्रत्येक परिणाम माइलस्टोन्स र मेट्रिकहरु संग जोडिएको छ कि डेटा लाई ग्राहक को जीवनकाल भर परिणाम उपलब्धि ट्र्याक गर्न प्रयोग गर्दछ।
परिणामहरू जुन तपाईंको ग्राहकहरूले ख्याल राख्दछन् डाटाको प्रकारलाई असर गर्दछ तपाईंले मेटाकएक्समा खिच्नुभयो। तपाईं घटनाहरू तपाईंको आफ्नै उत्पादनबाट वा तपाईंको सीआरएम, वित्तीय प्रणाली, वा घटना प्लेटफर्म सहितको अन्य प्रणालीबाट तान्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको व्यवसाय प्रणालीहरू एक पटक एक जडान मार्फत प्लेटफर्ममा घटनाहरू फीड गर्दछ, मेटाकएक्स मापदण्ड र समय सीमा प्रयोग गर्दछ तपाईं निर्दिष्ट गर्न ग्राहक कत्तिको नजिक छ परिणाम परिणामको लागि।
मेरोमा ट्यून गर्नुहोस् Martech Zone साक्षात्कार पोडकास्ट मेटाकएक्सका अध्यक्ष जेक सोरोफम्यानसँग आउँदो कुराकानीको लागि।
कार्यमा MetaCX हेर्न तयार हुनुहुन्छ? आज नै साइन अप गर्नुहोस् र टोलीले प्लेटफर्मको प्रत्यक्ष डेमो प्रदान गर्नेछ।
एक MetaCX डेमो अनुरोध गर्नुहोस्
टैग: kpisलाइफसाइकल मार्केटिंगजीवनकाल चरणहरूmetacxअनबोर्डिङसाससास जीवनचक्रसास lifecylce व्यवस्थापनबिक्री सक्षमतासफलता योजना
प्रकाशकहरूले एडटेकलाई उनीहरूको फाइदाको लागि मार्न दिइरहेका छन्